Dawlada Faransiiska oo ka hadashay sarkaal Shabaab Soomaaliya uga haystaan
Dawlada Faransiiska oo ka hadashay sarkaal Shabaab Soomaaliya uga haystaan.
Wasiirka Digfaaca Dowladda France Jean-Yves Le Drian oo Wareysi siinayay Wakaalada Wararka Shiinaha u faafisa ee Xinuha ayaa sheegay inay heleen xog kusaabsan inuu Nabad qabo Sarkaal Faransiis ah oo Xarakada Al-Shabaab ay kuheystaan gudaha Soomaalia.
Sarkaalka u dhashay France ee Al-Shabaab gacanta ugu jira ayaa lagu magacaabaa Denis Allex waxaana uu u yimid Soomaalia Tababaro uu siinayo Ciidamada Dowladda Soomaalia .
Wasiirka Difaaca France Jean-Yves Le Drian ayaa tilmaamay in lala hadalsiiyay Muweaadinkaasi Faransiiska ah ee Al-Shabaab mudada 3da Sano ah u Afduuban uu Caafimaad qabo balse sitoos ah uma uusan shaacin Halka Soomaalia uu kaga sugan yahay .
Mid ka mid ah lasbadaasi sarkaal ayaa gacanta Xisbiga ka baxsaday oo dawlada u soo galay, ilaa iyoi 8 ruux oo dhashay wadanka Faransiiska ayaa afduub ahaan loogu haystaa wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay.